Weftigii Guddoomiyaha Wakiilada Oo Kulamo Switzerland Ku Yeeshay | Somaliland.Org
Weftigii Guddoomiyaha Wakiilada Oo Kulamo Switzerland Ku Yeeshay
November 30, 2010	Switzerland (Somaliland.Org)- Wefdigii guddoomiyaha golaha Wakiilada Somaliland, Mudane C/raxmaan Maxamed C/laahi iyo guddoomiye ku xigeenka 1aad Mudane C/casiis Maxamed Samaale ay ku marayeen dalalka Yurub, ayaa booqday dalka Switzerland. Weftigaasi waxay booqdeen xarunta Baarlamaanka dalkaasi oo ay kulamo ku yeesheen. War–saxaafadeed golaha wakiiladu ka soo saareen socdaalkaasi waxa uu u dhignaa sidan:
“Xarunta Baarlamaanka Adduunka oo lagu soo dhaweeyey Wafdiga Baarlamaanka Somaliland Ka dib markii ay dhamaadeen kulanadii wafiga baarlamaanka Somaliland ee uu hogaaminayey Gudoomiyaha Golaha Wakiilada Md Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) uuna weheliyey Gudoomiye ku-xigeenka 1aad ee Golaha Wakiilada Md Cabdicasiis Maxamed Samaale ku lahaayeen dalka Jarmalka waxa ay u dhoofeen dalka Switzerland 25/11/2010 si ay booqasho shaqo ugu tagaan xarunta baarlamaanada adduunka ee ku taal dalka Switzerland, magaalada Geneva.
Xarunta IPU-da ( Inter-Parliamentary Union) ama ururka baarlamaanada addunka waxa Gudoomiyaha iyo Gudoomiye Ku-Xigeenka 1aad ku soo dhaweeyey Xogahayaha Guud ee ururka oo ah sarkaalka ugu sareeya Mr ANDERS B. JOHNSSON.
Wafdigu waxa ay Xogyaha Guud siiyeeen xog waran buuxa oo ku saabsan Somaliland iyo baarlamaanka Somaliland waxayna codsadeen inay baarlamaanka Somaliland loo ogolaado inuu xubin buuxa ka noqdo ururka iyaga oo xusay inay baarlamaanka Somaliland hore ugu soo qadimay IPU codsi xubinimo. Xoghayuhu waxa uu wafdiga u faahfaahiyey xeerka ururka iyo shuruudaha lagu soo galo ururka oo ay ugu muhiimsan tahay ka mid noqoshada qaramada midoobay ama haysashada goobjoognimo ee qaramada midoobay. Xogahayaha iyo wafdigu waxay isla garteen inay ka wada shaqeeyaan sidii Somaliland qiil loogu heli lahaa inay xubin ama goobjooge uga noqon lahayd IPU-da isaga oo Xoghayuhu siiyey wafdiga talooyin iyo tilmaamo. Kulankan oo ahaa mid taariikhi ah qaatayna laba saacadood waxa uu ku dhamaaday isfaham iyo is afgarad .
Kulankan ka dib waxa waftigu u dhoofay caasimadda dalka Switzerland ee BERN si ay ugula kulmaan Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee dalka Switzerland. Xarunta Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee dalka Switzerland ee magaalada BERN waxa wafdiga ku soo dhaweeyey laba danjire oo kala ahaa Ambassador MARCEL STUTZ, Head of the poltical affairs Division II, Africa and Middle East iyo Danjire FRANK SCHURCH, Deputy of the special envoy for the Sudan and the Horn of Africa . Gudoomiyaha iyo Gudoomiye ku xigeenku waxay xog waran balaadhan ka siiyeen labada sarkaal Somaliland waxayna siiyeen qoraalo ku saabsan Somaliland oo ka hadlaya doorashooyinka, maamul wanaaga, taariikhda iyo baarlamaanka Somaliland. Waxaanay labada sarkaal uga mahad celiyeen madaxda baarlamanka Somaliland warbixinta ay siiyeen waxayna xuseen inay ku marti qaadi doonaan aqoon isweydaarsi ku saabsan xog urursi oo wasaaradda Arrimaha dibedda ee Switzerland qaban doonto horaanta sanadka soo socda.
Waxay labada danjire soo jeediyeen inay wax badan ka tari doonto qadiyada Somaliland haddii wafdigu siiyaan xogwaranka ay siiyeen oo kale baarlamaanka Switzerland oo iyagu go’aamiya cida dawladdu siinayso kaalmo dhaqaaale iyo taageero siyaasadeedba. Madaxda baarlamaanka Somaliland waxay balan qaadeen inay la kulmi doonaan baarlamaanka Switzerland waqtiga ku munaasibka ah.Ugu dambeyntii waxa wafdigu ka codsaday madaxda ay la kulmeen in dawladoodu siiso Somaliland kaalmo horumarineed iyo aqoonsi siyaasadeed. Danjire SLUTZ oo hore dalkiisa uga noqday dalal Africa ku yaal waxa uu xusay inkasta oo Somaliland aanay ka mid ahayn dalalka Switzerland siiso kaalmada dhaqaale inay hadana si dadban u siiso lacag dhan laba milyan iyo badh dollar ( 2.5 million dollar) sanadkii oo ay sii mariso qaramada midoobay, EU-da iyo NGO-yo caalami . Wafdigu waxa labada danjire uga mahad celiyeen sida diiran ee ay u soo dhaweeyeen iyo rajada wanaagsan ee ay tuseen. Kulanka waxa goobjoog ka ahaa Md Cumar Yusuf Xuseen , Ergayga Somaliland ee Jarmalka iyo Yurubta Bari iyo ku qaybsanaha arrimaha Somaliland/somalia ee wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Switzerland.” Somaliland.org
Previous PostMadbacada oo markii u horaysay la timi agabkii daabacaada oo dhamaystiranNext PostXaflad Suugaaneed ay Ururka SYEWF ku qabteen Bristol iyo Wacadarihii Hadraawi iyo Boon Xirsi	Blog